Tonga tao amin'ny tanàna mazika i Tianjin Junya ary nanao ny laharana voalohany tao amin'ny China Foundry Die Casting Exhibition
Tamin'ny 26 Mey 2018, natolotry ny Association Machines Foundry Association China, ny fampirantiana China Foundry Die Casting mandritra ny telo andro dia nosokafana tamim-pahibemaso tao amin'ny Center International Convention and Exhibition Center. Amin'ity fampirantiana ity dia fampirantiana maherin'ny 400 avy any Chine, Etazonia, Canada, France, ny Un ...
Nanomboka tamin'ny 30 Novambra ka hatramin'ny 2 Desambra 2017, nosokafana tamim-pahagagana tao amin'ny Shanghai New International Expo Center ny fampirantiana iraisam-pirenena China (Shanghai) 2017! Fantatra fa fihaonambe iraisam-pirenena mihoatra ny 20, kaonferansa indostrialy ary hetsika maro hafa manohana no hatao amin'ny ...
Inona no atao hoe famatsiam-bola ary ahoana no fomba fiasa
Fanariana fampiasam-bola (Casting Wax very) Ireo singa toy ny fepetra takiana amin'ny famolavolana, ny vidiny ary ny fahaizana manamboatra dia manondro izay fizotran'ny fanariana tena mety amin'ny famokarana vokatra iray. Ity lahatsoratra mamaritra ny famatsiam-bola ity dia natao hanampiana anao handray fanapahan-kevitra amin'ny fandefasana vaovao. Fampiasam-bola ...
Inona avy ireo fahasamihafana misy amin'ny vy tsy metaly 304 sy 202?
1. Karazana vy inona no vy vy? Ny vy vy dia karazana vy. Ny vy dia manondro ny vy izay misy karbaona ambany noho 2% (C), ary ny vy dia mihoatra ny 2%. Ny fanampiana chromium (Cr), nikela (Ni), manganese (Mn), silicon (Si), titanium (Ti), molibdenum (Mo) ary singa hafa mampifangaro ...
Fampidirana dingana fanamainana vy tsy mahazatra telo
Amin'izao fotoana izao dia misy fomba telo fandefasana vy tsy misy fangarony eto amin'izao tontolo izao, izany hoe, fomba iray dingana, fomba roa, dingana telo. Dingana iray: metana elektrika mandrehitra vy tsy misy fangarony dingana iray, satria ny dingana iray dingana ho an'ny akora mitaky (miverina miverimberina vy ...
Stainless Steel - Kilasy 304 (UNS S30400)
Ny kilasy 304 dia matevina «18/8 ″. Izy io no vy tsy misy fangarony betsaka indrindra sy be mpampiasa indrindra, na dia misy safidy maro hafa aza misy; ary manana toetra mampiavaka azy tsara sy tsara. Ny firafitry ny austenitika mandanjalanja amin'ny kilasy 304 dia manome ...
Pickling sy Passivation
Ny vy tsy misy fangarony dia afaka manimba amin'ny serivisy raha misy fandoto ny atiny. Ny pickling sy ny passivation dia fitsaboana simika apetraka amin'ny ambonin'ny vy tsy misy fangarony mba hanala ireo loto ary hanampy amin'ny famoronana horonantsary chromium-oxide mitohy. Pickling sy passivation a ...
Fampiharana ara-pahasalamana an'ny Stainless Steel 304 (UNS S30400)
Amin'ny maha izy azy azy ireo, ny fitaovana natao ho an'ny fampiasana ara-pahasalamana dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny fepetra famolavolana sy famolavolana faran'izay mafy. Amin'izao tontolo izao izay mifantoka bebe kokoa amin'ny fitoriana sy ny valifaty noho ny ratra na fahasimbana nateraky ny tsy fitandremana ara-pahasalamana na inona na inona mifandraika na voarohirohy amin'ny fandidiana ...
Ahoana ny fiantraikan'ny fifanarahana fampiasam-bola China-EU amin'ny indostria vy tsy misy fangarony?
Tamin'ny 30 desambra 2020, ny mpitarika ny sinoa sy ny EU dia niara-nanambara ny fahavitan'ny fifanarahana feno EU-China momba ny fampiasam-bola, izay fifanarahana ifotony natao hanoloana ireo fifanarahana fampiasam-bola roa tonta misy eo amin'i Sina sy ny firenena mpikambana ao amin'ny EU ary hananganana firaisankina Shina. -EU b ...
Valve vy vita amin'ny vy tsy miova, Fitaovana fanariana famatsiam-bola, Fizarana fanariana fampiasam-bola, Valve indostrialy, Fittings Sodina tsy misy vy, Hazo fijaliana 316 Pipe Fitting Cross,